Company Profile - Xizi ascenseur Co., Ltd
Fifandraisana amin'ny vahoaka
Mitsangana mpandeha mikoriana
Horizontal mpandeha mikoriana
MOMBA NY XIZI
XIZI ascenseur CO., LTD dia tanteraka-nanana ny XIZI UHC fanampiny, miaraka amin'ny marika anaran'ny "XIZI" (antsoina hoe "XIZI"). Ny orinasa mikendry faran'ny avo-tsena, manan-danja mikendry amin'ny fampandrosoana ny ascenseur stratejika raharaha ny XIZI UHC. Ny marika dia mety ho Amaritana ny Datin'ireo XIZI indray ny taona 1981. Hatreto, tamin'ny taonjato hazo fijaliana io marika efa naharitra 30 taona mahery, ary nanome trano niavaka indrindra ny fitaterana vahaolana nandritra ny firenena sy ny faritra 60 eto amin'izao tontolo izao, nandresy foana tsena fankatoavana sy ny mpiara-miasa ny fitokisany. XIZI mifanaraka hatramin'ny farany, nanizingizina ny handeha hiverina any Fundament, mamoaka vokatra lavorary raha ny fifikiran'izy ireo amin'ny asa fitoriana.
Foiben-XIZI dia hita amin'ny any amin'ilay farihy ny Qingshan Lake fantatra amin'ny anarana hoe "ny Green Silicon Valley". Ny orinasa dia manana voasoratra renivohitr'i RMB 2.155 tapitrisa yuan sy ny mpiasa 3.000. Izany dia mitarika avo-end ascenseur orinasa ao Shina, mifantoka amin'ny fampidirana famolavolana, R & D, fanamboarana,-barotra, fametrahana sy Ankehitriny-varotra escalator fanompoana ny vokatra. Vokatra avy amin'ny orinasa tafiditra mpandeha ascenseur, Panoramika ascenseur, Machine roonless elevaror, hopitaly ascenseur, entana ascenseur, escalator, walkway mihetsika, sns ascenseur an-trano, ny 8 andian-dahatsoratra, ary mihoatra ny 10 ascenseur karazana.
Ny orinasa efa nanendry ny tongony ao amin'ny orinasa Efa ho 35 taona, no mafy orina fikarohana siantifika sy ny zava-baovao hery. Ankehitriny dia manana mihoatra ny 300 manokana ara-teknika, 60 patanty tetikasa, dia manaiky 20 fikarohana manan-danja sy ny tetikasa fampandrosoana sy ny famoahana 3 na 4 averagely vokatra vaovao isan-taona. Nandritra izany fotoana izany, ny orinasa corporately Nanangana XIZI Research Institute of Zhejiang University amin'ny University Zhejiang. Miara-miasa betsaka amin'ny malaza anjerimanontolo toy ny Tsinghua University sy Shanghai Jiaotong University, XIZI dia nanorina ny R & D foibe, ny famokarana sy fanamboarana foibe, telo sehatra ny kalitao fisafoana foibe ao amin'ny Mazava ho azy fa ny mikatsaka specialization ny vokatra, toetr'andro ny mpanamboatra sy fahafahana ny toeram-piasana. Manaraka ny hevitry ny hoe "Mandroso miaraka amin'ny Times, mitohy Fanavaozana", ny orinasa dia mitandrina ny mahery foana fifaninanana.
Ny orinasa dia efa voamarina ny ISO9001 Quality Management System, ISO14001 Environmental Management System, OHSAS18001 Asa Fahasalamana sy Safety Management System sy ny tsena entina taratasy fanamarinana ny avo indrindra eto amin'izao tontolo izao, toy ny tamin'ny taona taratasy fanamarinana ho an'ny EU tsena entina ny mitondra vokatra, CSA taratasy fanamarinana ho an'ny Avaratra America tsena entina, sns ny orinasa mpanamboatra manana fahazoan-dalana ny avo lenta eo amin'ny orinasa an-trano sy ny Level A fametrahana, fanodinana sy ny fikojakojana fahazoan-dalana.
Ny fivarotana Network ny orinasa stratejika amin'ny teny iray fomba "foiben'ny iray, dimy faritra lehibe", miaraka amin'ny vokatra mihitatra mihoatra ny faritra rehetra ao amin'ny firenena. XIZI efa nanangana biraon'ny sampana 34 sy 28 sampan-draharaha isan-karazany afovoan-tanàna, toy ny Hangzhou, Jinan, Changsha, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Xi'an, Hefei sy Nanjing, sns, fanoloran-tena fa manome "iray-stop" fanompoana manontolo ny mpanjifa. ny fitaovana ascenseur dia aondrana ny firenena sy ny faritra 70 anisan'izany Eoropa, Moyen-Orient, Azia Atsimo-atsinanana sy Aostralia, sns Ao amin'ny mandritra izany, dia nanorina ny orinasa isan-karazany sy ny sampan-draharaha manokana maharitra mpiara-miasa sy miara-miasa stratejika niforona fanta-orina ny varotra sy ny asa fanompoana oversea rafitra.
"Fanompoana ho an'ny tsirairay Sincerely ascenseur, manome soa aman-maharitra vokatra ny mpanjifa" dia ny raharaha ny XIZI filozofia. Ny orinasa Manizingizina ny toe-tsaina orinasa fikirizana fikatsahana ny fiarovana, fahombiazana, angovo-mamonjy sy fampiononana ny vokatra, mba hanome kilasy tontolo izao ny teknolojia, vokatra sy ny fanompoana ny mpanjifa.
Copyright © 2017 XIZI ascenseur